Go'aanka - Eegista Ilaah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Go'aanso inaad eegto Ilaah
Muuse wuxuu ahaa nin camal qabow. Ilaah baa isaga u doortay inuu Masar ka soo bixiyo Masar. Wuxuu la wadaagay Badda Cas. Ilaah baa isaga siiyey Tobanka Amar. Dadka ku jira teendhooyinka, kuwaas oo marmar muraayad u soo qaatay Muuse markii uu ag marayay, malaha waxay yiraahdeen: kanu waa isaga. Kanu waa Muuse. Waa kan. Isagu waa addoonkii Ilaah. Isaga waa nin weyn oo xoog badan. Laakiin waxa keliya ee ay arkaan Muuse waa markii uu xanaaqay oo dhagaxii ku garaacay ushii. Markaas waxay u malayn lahaayeen waxa nin xanaaqsan. Ilaah sidee buu weligiis u isticmaali karaa? ”Daa'uud wuxuu ahaa nin qalbiga ka dambeeya. Wuxuu raadinayay doonista Eebbe si uu noloshiisa ugu qaabeeyo. Iyada oo hubaal ah, ayuu dilay golaadkii weynaa Goli'ad. Wuxuu qoray sabuurro. Ilaah baa isaga u doortay inuu Saa'uul beddelo oo boqor noqdo. Markuu Daa'uud dhex maray boqortooyadii oo dadku ay ku soo arkeen isaga, waxay u badan tahay inay dhahaan: waa uu jiraa. Taasi waa Boqor David. Isagu waa addoonkii Ilaah. Waa nin weyn oo xoog badan !. Laakiin maxaa dhacaya haddii keliya oo ay arkeen Daa'uud markii uu qarsoodiga u qariyey Batshebac? Mise markuu ninkeedii Uuriyaah u diray dagaalka horteeda si loo dilo? Haddaba miyaad odhan lahayd nin xaqdarro ah! Haddaba bal sidee buu weligiis u isticmaali karaa isaga?
Eliiyaah wuxuu ahaa nin nebi caan ah. Isagu Ilaah buu la hadlay. Isaga Erayga Eebbe ayuu dadka ugu gudbiyay. Wuxuu samada ugudbay dab samada. Wuxuu caayay nebiyadii Bacal. Haddii dadku aragtida u soo jeedaan Eliyaas, waxay si xushmad leh ugu dhahayaan kan: Eliyaas waa Eliyaas. Waa nin weyn oo xoog badan. Isagu waa addoonkii Ilaah oo run ah. Laakiin maxaa dhacaya haddii waqtiga keliya ee ay arkeen Eliiyaah ay ahayd markii uu ka cararay Yesebeel ama markii uu ku dhuumanayay god ka baqaa naftiisa. Ma dhihi lahayd: waa fulay! Isagu waa marada dharka lagu maydho. Ilaah weligiis sidee u isticmaali karaa?
Sidee bay adoomahan waaweyn ee Eebbe u wadaagi lahaayeen Badda Cas maalin gudaheed, weynayan dili karaan ama dab samada uga tuuri karaan, oo xanaaqsan, caddaaladdarro ah, ama cabsi gelin karaya maalinta ku xigta? Jawaabtu way fududahay: waxay ahaayeen dad. Halkani waa meesha ay dhibaatadu ka taagan tahay marka aan isku deyno inaan sanamyo ka sameysanno hoggaamiyeyaasha Masiixiyiinta, asxaabta, ehelka, ama qof kasta. Dhammaantood waa dadnimo. Waxay leeyihiin cago ka samaysan dhoobo. Ugu dambeyntiina waad niyad jabi doontaa. Waxaa laga yaabaa in taasi tahay sababta uu Eebbe noogu sheegay inaanan isbarbar dhigin oo aan kuwa kale xukunno (2 Korintos 10,12:7,1; Matayos). Waa inaan eegno Ilaah marka hore. Markaa waa inaan eegnaa wanaagga kuwa u adeega oo raaco. Sidee baan waligeen u arki karnaa gebi ahaanba qofka haddii aan aragno qayb yar oo isaga ka mid ah? Kaliya Ilaah wuxuu arkaa dadka gebi ahaanba iyo wakhti kasta noloshooda. Waa tan parabola oo tan tusaysa tan.
Geedka xilligiisa oo dhan
Boqor Faaris gaboobay ayaa mar doonayay inuu uga digayo wiilashiisa ka soo horjeedista samaynta xukun deg deg ah. Amarkiisa, wiilka curadka ah wuxuu u baxay safar qabow si uu u arko geed mangoor. Guga ayaa yimid wiilkii ku xigana loo diray isla safarkaas. Wiilkii saddexaad wuxuu raacay xagaagii. Markuu wiilkii yaraa ka soo noqday safarkiisii ​​deyrta, boqorka ayaa u yeedhay wiilashiisii ​​oo loo yeedhay iyo geedkii la tilmaamay. Kii hore wuxuu yiri: Waxay umuuqataa sidii jir duug ah oo la gubay. Kii labaad ayaa mar labaad hadlay: waxay umuuqataa mid jilicsan oo ubax leh ubax qurux badan. Kii saddexaad ayaa sharxay: Maya, wuxuu lahaa ubax cajiib ah. Kii afraad ayaa yidhi: kulligiin waad qaldan tihiin, wuxuu leeyahay miro sida isteroberi ah. Wax kastoo aad tidhaahdo waa sax, ayuu boqorku yidhi: maxaa yeelay midkiin kastaaba waxaad aragteen geedka waqti gooni ah! Anaga ahaan annaga, markaan maqalno fikradaha qof kale ama aragno ficilladooda, waa inaan dib u dhignaa go'aankeenna ilaa aan hubno inaan wax walba fahamnay. Xusuusnow sheekadaas. Waa inaan aragnaa geedka waqtiyadiisa oo dhan.